Ukuqwalasela isiluleko seJografi njengeSayensi
Uninzi lwemfundo yamabanga aphakamileyo, ngokukodwa eUnited States, lubandakanya isifundo esincinci sejografi. Bakhetha indawo yokuhlula kunye nokugxila kwezesayensi ezininzi zenkcubeko nezemvelo, ezifana nembali, i-anthropology, i-geology, kunye ne-biology, ezidibeneyo ngaphakathi kweendawo zombini zenkcubeko kunye nesimo sezendalo .
Umkhwa wokungahoyi i-geography kwiiklasi zibonakala ngathi zitshintsha kancane , nangona kunjalo.
Iiyunivesithi ziqala ukuqonda ngakumbi inani lokufunda nokuqeqeshwa kwendawo kunye nokubonelela ngeeklasi kunye namathuba enqanaba. Nangona kunjalo, kusekho indlela ende yokuhamba ngaphambi kokuba ijejografi ibonwa ngabantu bonke njengenyaniso, yedwa kunye nesayensi eqhubekayo. Eli nqaku liza kubhala ngokufutshane iinkalo zembali ye-geography, ukufumanisa okubalulekileyo, ukusetyenziswa kweziyalo namhlanje, kunye neendlela, imodeli kunye nobuchwepheshe obusebenzisa i-geography, kubone ubungqina bokuba i-geografi ifanelekile njengeyona nto yenzululwazi.
Uqeqesho lwe-geography luphakathi kweyona ndlela yendalo yezobugcisa, mhlawumbi nangona mdala kunokuba ifuna ukuphendula ezinye zezinto eziphambili zomntu. IJografi yaqashelwa njengdala njengesifundo, kwaye iyakwazi ukulandelwa ku- Eratosthenes , isazi seGrike esasihlala malunga no-276-196 BCE kwaye ngubani obizwa rhoqo ngokuba ngu "uyise we-geography." U-Eratosthenes wakwazi ukuqikelela ukujikeleza komhlaba ngokuchanileyo ngokuchanekileyo, usebenzisa iimazi zethunzi, umgama phakathi kweedolophu ezimbini kunye nefomatic formula.
UClaudius Ptolemaeus: I-Scholar yamaRoma kunye ne-Geographer yakudala
Omnye ubalulekileyo we-geographer wasendulo nguPtolemy, okanye uKlaudius Ptolemaeus , isazi seRoma esasihlala malunga ne-90-170 CE. UPtolemy uyaziwa ngokubhala kwakhe, i-Almagest (malunga neenkwenkwezi ze-astrology kunye nejometri), iTetrabiblos (malunga neenkwenkwezi) kunye neJografi - ekuqondeni ngokubanzi ngokubanzi kwendawo yelo xesha.
IJografi esetyenzisiweyo yokuqala ye-grid coordination, longitude and latitude , ixoxwe ngombono obalulekileyo ukuba imimandla emithathu efana nomhlaba ayikwazanga ukumelwa ngokucacileyo kwiplanethi emibini, kwaye yanikezela iimephu ezininzi kunye nemifanekiso. Umsebenzi kaPtolemy wawungekho ochanileyo njengoko kubalwa namhlanje, ngenxa yeendlela ezingahambi kakuhle ukusuka kwindawo eya endaweni. Umsebenzi wakhe wathonya abaninzi beepaltographer kunye neengcali ze-geographer emva kokufunyanwa kwakhona ngexesha loKuvuselela.
UAlexandro von Humboldt: UBawo weJografi
U-Alexander von Humboldt , umhambi waseJamani, usosayensi, kunye ne-geographer ukususela ngo-1769-1859, ubizwa ngokuba "nguyise weengingqi zanamhlanje." UVon Humboldt wanikela ngemibutho efana nokwehla kwamagnetic, permafrost, amazwekazi, kwaye wenza amakhulu ukuhamba ngokubanzi-kuquka ukuveliswa kwayo, iimephu zeemvula (iimephu kunye nama- isolines abonisa amaphulo afana neshushu). Umsebenzi wakhe omkhulu, i-Kosmos, ukuhlanganiswa kolwazi lwakhe ngomhlaba kunye nolwalamano lwawo nabantu kunye nehlabathi-kwaye lihlala linye yeyona nto ibaluleke kakhulu kwimisebenzi yoluntu kwimbali yoqeqesho.
Ngaphandle kweEratosthenes, uPtolemy, von Humboldt, kunye nezinye izinto ezininzi ezibalulekileyo zengingqi, izinto ezibalulekileyo nezibalulekileyo, ukuhlolwa kwehlabathi kunye nokwandisa, kunye nobuchwepheshe bokuqhubela phambili bekungeke kwenzeke.
Ngokusetyenziswa kwabo kweemathematika, ukubonwa, ukuhlola kunye nophando, uluntu luye lwakwazi ukufumana inkqubela phambili kwaye lubone ihlabathi, ngendlela engacatshangelwayo kwindoda yokuqala.
Ijografi yanamhlanje, kunye nabaninzi bama-geographer bokuqala, bayamathela kwindlela yesayensi kunye nokulandela imigaqo yezenzululwazi kunye nengqiqo. Ubuninzi obuninzi bokufumanisa kunye nokuqulunqwa kwemvelo kwaveliswa ngokuqonda okunzima komhlaba, ubunjani bawo, ubungakanani, ukujikeleza, kunye nokulinganisa kwemathematika ezisetyenziswayo. Iinkcukacha ezifana nekhampasi, izantsi kunye nezantsi, iipotnetism, i-latitude kunye nobude, ukujikeleza kunye nokuguqulwa, ukubonakalisa kunye neemephu, i-globe, kunye nezinye iinkqubo zamanje, i-GIS), iinkqubo zokubeka umhlaba jikelele (GPS), kunye nokude ukuqonda - zonke zivela ekufundeni ngokukhawuleza kunye nokuqonda okunzima komhlaba, izibonelelo zayo kunye neemathematika.
Namhlanje sisisebenzisa kwaye sifundisa i-geografi njengokuba sinamakhulu eminyaka. Sivame ukusebenzisa iimephu ezilula, ii-compass kunye ne-globe, kwaye ufunde malunga nezobugcisa kunye neenkcubeko zemihlaba eyahlukeneyo yehlabathi. Kodwa namhlanje sisebenzisa kwaye sifundisa i-geography ngezindlela ezahlukeneyo. Siyihlabathi elinobuchwephesha kunye nekhompyutha. IJografi ayifani nenye inzululwazi eziye zaphuka kuloo ndawo ukuze zenze ngcono ukuqonda kwethu kwehlabathi. Asinayo kuphela iimephu zedijithali kunye neenkomasi, kodwa i-GIS kunye nokuqonda okude kukuvumela ukuqonda umhlaba, umoya, imimandla yayo, iinkalo zayo ezihlukeneyo kunye neenkqubo, nokuba zonke zinxulumene njani nabantu.
UJerome E. Dobson, umongameli we-American Geographical Society ubhala (kwinqaku yakhe ngokusebenzisa i-Macroscope: IJografi yeZibonelelo zeHlabathi) ukuba ezi zixhobo zanamuhla zenze i-macroscope evumela ukuba izazinzulu, oogqirha kunye noluntu ngokufanayo bajonge umhlaba akusoze ngaphambili. "UDobson uxela ukuba izixhobo zendawo zivumela ukuba uphuhliso lwezesayensi, kwaye ngoko i-geography ifanelekile indawo phakathi kwezesayensi eziphambili, kodwa ngokubaluleke kakhulu, ibaluleke kakhulu indima kwimfundo.
Ukuqaphela i-geography njengenzululwazi ebalulekileyo, nokufunda nokusebenzisa izixhobo zendawo eziqhubekayo, kuya kuvumela ezininzi izinto ezenzululwazi kwihlabathi lethu
Iprofayile yoMculi weBon Jovi
Umsebenzi woMgca weConstruction kunye neAnatomy